हराउँदै पञ्चेबाजाको धुन- प्रदेश ५ - कान्तिपुर समाचार
हराउँदै पञ्चेबाजाको धुन
भाद्र १२, २०७५ दुर्गालाल केसी
दाङ — घोराही उपमहानगरपालिका १८, ढोडेनीका चामबहादुर दमाई कुनै बेला गाउँका हरेकजसोको घरमा दमाहा बजाउन पुग्थे । चाडपर्व, विवाह, व्रतबन्ध, मलामीजस्ता संस्कारमा बाजाको अनिवार्य आवश्यकता हुन्थ्यो ।
दाङको घोराही १८ ढोडेनीका पञ्चबहादुर दमाईका एकै परिवारका सदस्य पञ्चेबाजा बजाउँदै । तस्बिर : दुर्गालाल
उनी दमाहा बजाउन नगएर सुखै थिएन । केही वर्षयता भने उनको दैनिकी फेरिएको छ । बजारमा हुने जुलुस, सभा र औपचारिक कार्यक्रममा मात्रै उनी दमाहा बजाउन पाउँछन् ।
‘अचेल गाउँघरमा पञ्चेबाजाको महत्त्व छैन । चाडपर्व र विवाहमा पनि गीत बजाएर नाच्न थाले,’ दमाईले भने, ‘यो बाजाको भाउ घट्न थाल्यो । नेताहरू आएपछि र बजारमा कार्यक्रम भएपछि मात्रै हाम्रो माग हुन्छ, नत्र खाली नै बस्छौं ।’ १२ वर्षको हुँदा नै बुबाको पछि लागेर दमाहा बजाउन थालेका दमाईले ५७ वर्षसम्म निरन्तर यही पेसा गरे ।
तीन पुस्तादेखि परिवारले पञ्चेबाजासँगै जीवन बिताइरहेको अनुभव उनले सुनाए । ‘मेरो त अझै रहर मरेको छैन । ज्यान पाल्ने मात्रैभन्दा बाजाको पनि माया लाग्छ । यो बाजालाई बचाउन पाए हुन्थ्योजस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘गाउँघरमा यसको प्रयोग हुन छोडेपछि कसले बचाउला ? सबैतिर क्यासेट र भिडियो मात्रै बज्छन् । पञ्चेबाजाको धुनै बचाउन गाह्रो भो ।’
पञ्चेबाजाको धुनले मौलिक संस्कृतिको रक्षा गर्ने ढोडेनीकै महेन्द्र नेपालीले बताए । बाजाको उपेक्षा हुँदै गएकामा उनले दु:ख पोखे । ‘यो बाजा बजाउँदा गाउँको शोभा बढ्छ । धुन नै मौलिक खालको हुन्छ । डेग बजाएर आउने धुनले हाम्रो संस्कृतिलाई चौपट पार्‍यो,’ उनले भने, ‘यो बाजा बचाउन अब सबैले ध्यान दिनुपर्छ । सबैले हेला गर्न थाले भने एक दिन यसको अस्तित्व नै समाप्त हुनेछ ।’
अरू समुदायको सोचाइ र व्यवहार अझै पनि विभेदकारी नै रहेको उनले गुनासो गरे । बाजा बजाउन जाँदा पनि सीप र कलाको सम्मान हुन नसकेको उनले बताए । ‘बाजा बजाउन जाँदा पनि दमाई भनेर हेपाहा प्रवृत्तिले हेरिन्छ । यति ठूलो बाजा बोकेर बजाउँदै घामपानीमा हिँड्नुपर्छ तर श्रमको उचित मूल्य पाइँदैन,’ उनले भने, ‘हामीलाई एकछिनका लागि मात्रै प्रयोग गरिन्छ । नयाँ पुस्ताले त झन् पुरानो बाजाबारे थाहा पाएकै छैन । उनीहरूलाई मोबाइलमा बज्ने गीत मात्रै थाहा छ ।’
पञ्चेबाजा बजाउन धेरै मानिस चाहिने भएकाले यसलाई निरन्तरता दिन समस्या भइरहेको नेपालीले बताए । अहिले घरपरिवारकै सदस्यहरू मिलेर बजाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । अरू कोही नभएपछि श्रीमती र छोराछोरीलाई पनि बाजा बजाउन लगाएको उनले सुनाए ।
अहिले बाजा बचाउने जिम्मेवारी परिवारमा सीमित भएको मेहन्द्रकी श्रीमती राजकुमारीले बताइन् । ‘अरू कोही पनि बाजा बजाउन चाहँदैनन् । परिवारकै सदस्य मिलेर बाजाको मर्म पूरा गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘छोरी निशालाई पनि बाजा बजाउन हिँडाइरहेका छौं । वर्षौंदेखि गर्दै आएको पेसाको माया लाग्छ । छोड्न पनि सकिएको छैन ।’
प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०९:४९
उपमहानगरमा स्तनपान कक्ष
दाङ — तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले स्तनपान कक्ष सुरु गरेको छ । सुत्केरी र बच्चाको स्वास्थ्य प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्तनपान कक्षको सुरुवात गरेको उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक डा. गोकर्ण दाहालले बताए ।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यालयमा स्तनपान कक्षको सुरुवात गरिँदै । तस्बिर : दुर्गालाल केसी
बच्चालाई ६ महिनासम्म अनिवार्य आमाको दूध मात्र खुवाउनुपर्ने भएकाले सुत्केरी प्रोत्साहन भत्ता लिन आउने र सानो बच्चा बोकेर आउने सेवाग्राही र कर्मचारीलाई मध्यनजर गरी कक्ष स्थापना गरिएको उनले बताए । करिब दुई लाख रुपयाँको लगानीमा निर्माण गरिएको उक्त कक्षमा सुतेर दूध खुवाउनका लागि एउटा खाट र बस्नका लागि सोफा राखिएको दाहालले जानकारी दिए ।
‘आमा र शिशुको स्वास्थ्य अवस्थालाई ख्याल गर्दै स्तनपान कक्ष सुरु गरिएको छ । यसले मातृशिशु संरक्षणमा सहयोग पुर्‍याउने छ,’ उनले भने, ‘बच्चा बोकेर काममा आउनेलाई आजसम्म स्तनपानको समस्या थियो । कतिले स्थान अभावले नै बच्चालाई दूध नखुवाउने समस्या हुन्थ्यो । अब यो समस्या टरेको छ ।’
महिलाहरूले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको समस्या भए पनि आजसम्म कसैले सार्वजनिक स्थलमा स्तनपान कक्षको आवश्यकताबारे ध्यान नदिएको उपमहानगरकी उपप्रमुख माया आचार्यले बताइन् । ‘बच्चा बोकेर काममा आउनुपर्ने तर स्तनपान गराउने ठाउँ नपाउने समस्या धेरैले भोग्दै आएका छन् । बच्चा जति रोए पनि दूध खुवाउन नपाउने अवस्था हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘खुलारूपमा दूध खुवाउनु असुरक्षित र जोखिमपूर्ण हुन्छ । यो कक्षले स्तनपानको समस्या हटेको छ । सुत्केरीले अब सुरक्षित स्तनपान गराउन सक्छन् ।’
पाँच महिने छोरा बोकेर नगरपालिका पुगेकी तुलसीपुर ७ की विनीता केसीले स्तनपान कक्षमा स्तनपान गराउन पाउँदा धेरै सहज भएको बताइन् । ‘बच्चा बोकेर काममा हिँड्नुपर्छ । बच्चा भोक लागेर रुँदा पनि सुरक्षित ठाउँ नभएर स्तनपान गराउन पाइँदैन,’ उनले भनिन्, ‘जहाँ पायो त्यहीं बस्न पनि नसकिने । यहाँ छुट्टै कक्ष भएपछि धेरै सजिलो भयो । सबै कार्यालयले यस्तै व्यवस्था गरे राम्रो हुने थियो ।’
कर बुझाउन नगरपालिका आएकी तुलसीपुर ५ की विपना ओली पनि स्तनपान कक्ष उपयोग गर्न पाएकोमा खुसी भइन् । ‘यसअघि बच्चालाई रुवाउँदै हिँड्नुपथ्र्यो,’ उनले भनिन्, ‘अब यसले धेरै राहत मिलेको छ ।’ सुत्केरी आमा र बच्चाप्रति सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय गम्भीर हुनुपर्ने तुलसीपुर १७ की शर्मिला चौधरीले बताइन् । ‘समयमा दूध खुवाउन नपाउँदा बच्चालाई पोषण पुग्दैन,’ उनले भनिन्, ‘दिनभर काममा हुने महिलाहरूलाई धेरै नै समस्या छ । यो राम्रो कामको सुरुवात भएको छ ।
प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०९:४७